ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်၏ ပြည်သူသို့ အသိပေးပြောကြားချက်… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်၏ ပြည်သူသို့ အသိပေးပြောကြားချက်…
·9months ago ·34 Comments
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်၏ ပြည်သူသို့ အသိပေးပြောကြားချက်
“အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာ အဖက်ဖက်က ချွတ်ခြုံကျနေပြီး အကြီးအကျယ်အကျပ်အတည်းဆိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီး မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ စီပွားရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးစစ်မျက်နှာမှာလည်း စစ်အုပ်စုဟာ မရှုမလှရှုံးနိမ့်ပြီး အထိနာလျက်ရှိပါတယ်။
အခုဆိုရင် အာဏာရှင်ယန္တရားကိုလည်ပတ်ဖို့ သူတို့လက်ထဲမှာ လုံလောက်တဲ့ပိုက်ဆံမရှိတော့ပါဘူး။
ဝင်‌ငွေရလမ်းတွေ အကုန်လုံးနီးပါးကလည်း ရပ်တန့်ကုန်ပါပြီ”
စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဝန်ကြီးဌာန
Like – 14K Share – 3516
Lucky D. Ace says:
မနက်ဖြန် မေလ ( ၂) ရက်နေ့မှာ အားလုံးတက်ညီလက်ညီပြန်ထွက်ကြပေးပါ…
၂ ငါးလုံးသပိတ်လိုပဲ လူညီကြပေးပါ…
အခုက တပ်က တကယ်ကိုပျက်နေပြီ…
တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်း တွန်းလှဲပစ်ဖို့ပဲ လိုတော့တာ 💪
2021-05-01 at 2:30 PM
Thanksalot the Great Effort of all NUG members. Be safe and healthy all members 🙏🙏🙏
ပြည်သူတွေ အတွက် ကြိုးစားပေးတယ့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
2021-05-01 at 2:32 PM
မီတာမ​ဆောင် အခွန်မ​ဆောင်တာ​တော့တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်နိုင်တာမလို့ လုပ်မှာပါ
​သေနတ်​ထောက်ပြီး ​တောင်းလာရင်​တော့ဘယ်သူမှ မ​ဆောင်ပဲမ​နေနိုင်ပါဘူး
De facto ရ​အောင်အမြန်ယူပါ
လက်နက်မရှိရင်တစ်ပန်းရှုံးတာမို့ လက်နက်ရှိ​အောင်မြန်မြန်လုပ်ပါ ခင်ဗျာ
2021-05-01 at 2:33 PM
ခု မီတာခ​တွေ ဓါးပြတိုက်​နေတယ်
Myo Min Oo says:
2021-05-01 at 2:42 PM
CDM လုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းအချို့ ဆက်သွယ်အကူညီတောင်းခံလာကြပါတယ် ကူညီနိူင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ်ပေးပါလို့ပြောနေကြပါတယ် အခက်ခဲတွေကြုံနေရလို့ပါတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေပါ မီးရထား ဝန်ထမ်းအချို့ လဲဆက်သွယ်လာပါတယ် CRPH ကအကြောင်းမပြန်လို့ပါတဲ့ အခက်ခဲများကြုံနေရပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးကူညီ ကယ်တင်ပေးဖို့ သူတို့ကိုယ်စား အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်
Win Min Kyaw says:
2021-05-01 at 2:43 PM
ပြည်သူလူထုအတွက် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့အား ယုံကြည်အားကိုး လေးစား ဦးညွှတ်လျက်ပါခင်ဗျာ။
We support NUG။
2021-05-01 at 2:51 PM
စျေးထဲလက်နက်နဲ့ ဆိုင်ခန်းခ လိုက်ကောက်နေပါပြီ
ကိုပိ ခေါ် ကိုဇော်ဝင်းထွန်း says:
ဒီနေ့ မေလ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံမြို့နယ်အသီးသီးမှာ ခွေးဆွဲသတင်းတွေအများကြီး ကြားနေရပါတယ် ၊ မနက်ဖြန်ကို ထိမ်းချင်လို့ ဒီနေ့ကို တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ခုလိုတချိန်တည်း တပြိုင်နက်တည်း ဆွဲပြနေကြပုံပါပဲ။
2021-05-01 at 3:02 PM
အားရှိလိုက်တာ မ​နေမနားကြိုးစား​နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့​တွေကိုလည်း​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဝန်ထမ်းတစ်​ယောက်အ​နေနဲ့ ကြံ့ကြ့ခိုင်ပြီးမယိမ်းယိုင်ခဲ့ပါဘူး ၊ ​အောင်ပွဲလက်တစ်လှမ်း
U Pho Zaw says:
2021-05-01 at 3:16 PM
2021-05-01 at 3:21 PM
1Bသာ ထုတ္ရရင္ ပြဲကေတာ့ လွျပီ
CDM ဝန်ထမ်းတွေ လစာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု ဘယ်အဆင့်ရောက်ပါ ပြီလဲ ခင္ဗျာ။ အားတော့ နာပါ တယ် ခင်ဗျာ။
Kyaw Htet Lin says:
ကညန နဲ့ အာမခံရုံးမှာတော့ တန်စီ သက်တမ်းတိုးနေတာဘဲ
Jun Moe says:
2021-05-01 at 3:44 PM
ဒီအရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်ဖို့ အဖတ်ဖတ်က ဝိုင်း၀န်းကြိုးပမ်းကြတဲ့တို့ ပြည်သူတွေ အားလုံးကို လေးစား‌စွာဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောင်စိတ်ထားပြီးဆက်လက် တော်လှန်တိုက်ပွဲ၀င်ကြပါစို့ လို့
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် 💪💪💪
Sabai Oo says:
2021-05-01 at 4:04 PM
Thin Thin Naing Hayashi says:
Tu Sa Mi says:
2021-05-01 at 4:09 PM
အောင်ဘာလေ သိန်းထီ မထိုးအောင် ပြည်သူများကို အမြန်ဆုံး လှုံ့ဆော် တွန်းအားပေးသင့်ပါသည်။
၎င်းသည် NUG ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် ကြေညာပေးရင် ပိုမို ထိရောက် ပါလိမ့်မယ်။
မိစ္ဆာ စကစ မှ ယခု မေလ ၁ ရက်နေ့တွင်မှ အမြင့်ဆုံး ဆုငွေ အဖြစ် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ကို ဖွင့်ပေးမည်ဟု ကြေညာ ထားပါသည်။ ယနေ့ ထီ ဖွင့်မည်ဟု သိရပါသည်။
ဤသို့ ဆုငွေ ဖွင့်နိုင်ခြင်းသည် ထီထိုးသူ အထိုက်အလျောက် ရှိနေသေးကြောင်း သက်သေ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ တကယ် ထုတ်ပေး မပေးတော့ မသိပါ။
သို့သော် ထီထိုးထားသောငွေ အများစုမှာ သူတို့၏ ငွေကြေး ယန္တရား ကို ကြီးစွာ အထောက်အကူ ပြုနေမည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် အမိန့်ထုတ်ပြန် တားဆီးပေးလျှင် ပိုမို ထိရောက်စွာ ဟန့်တားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလို ထီမထိုးခြင်းသည် ပြည်သူ့ CDM ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြသင့်ပါသည်။
အောင်ဘာလေထီအပြင် အခြားသော ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုများ ပြန်ရောက်မသွားနိုင်အောင် ထုတ်ပြန်သင့်သည့် အကြောင်း အရာအားလုံးကို ရှာဖွေကြံဆ ထုတ်ပြန်ပေးနေခြင်းသည် NUG ကို ပိုမို အသက်ဝင်နေစေ သကဲ့သို့ စကစ မိစ္ဆာ များကို ငွေကြေးပြဿနာ ပိုပိုစေနိုင်ကြောင်း အကြံပြုပါရစေ။
2021-05-01 at 4:36 PM
Thank you very much. We support National Unity Government (NUG)
2021-05-01 at 4:53 PM
Zin Mar Htun says:
2021-05-01 at 5:24 PM
Thank you and respect you our minister, အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Aung Kha says:
Yes,all in one is doing to fight for democracy…..military coup is closed.
TinTin Htay says:
2021-05-01 at 5:50 PM
ဖြစ်စဉ်များကိုမှန်မှန်ကန်ကန် မချွင်းမချန် ပြောကြားပေးသော ဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်အား လေးစား ဂုဏ်ယူ ကျေးဇူးတင် နေပါတယ် ၊ ပြည်သူများမှလည်းယုံကြည်စွာဖြင့် အားကိုး နေပါတယ် ၊
ပြည်သူ့ အစိုးရဲ့ ပြည်သူ့ ဝန်ကြီး ပြောတာနားထောင်ရတာ အားတက်ပြီး ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ေအာင် ကြီး says:
2021-05-01 at 10:14 PM
Yam Thitsar says:
2021-05-02 at 10:57 AM
အစစ အားလံုးက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ လိုရာေတြ ျပည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။ တစ္ကယ္ ရင္ထဲက ဆုေတာင္းေပးတာပါ။
Hlaing Phone Myint says:
2021-05-03 at 12:13 AM
မီတာမဆောင်ဖို့ အခွန်မဆောင်ဖို့ လက်နက်နဲ့ လာမချိန်းခြောက်ခင်အထိ တောင့်ခံထားမှာပါ
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအနေနဲ့လဲ နိုင်ငံတကာကို စောင့်နေတာထက် ပိုမြန်မြန်လေး လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်
ကြိုးစားနေတဲ့ ကလေးတွေ သေဆုံးနေတာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံနေရတာကို မကြည့်နိုင်တော့လို့ပါ
Sansan Yu says:
2021-06-09 at 9:13 PM
2021-06-24 at 10:11 PM
လင်းသုတ လင်းသုတ says:
2021-07-07 at 9:12 AM
Zayar Naing says:
2021-07-12 at 7:14 PM
ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ says:
2021-07-28 at 12:46 PM
U Thant Zin says:
2021-08-13 at 9:36 PM
ဉီးတင်ထွန်းနိုင်လဲ စိတ်၏ကျန်းမာချင်နဲ့ပြည်သူ့အကျိုးကိုစွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွှက်နမုင်ပါစေလို့ စစ်အာဏာအဖွဲ့ ကျဆုံးရမည် NUG အစိုးရ အနိုင်ရမည်။
CDM Song_Lyric Video (May 1/2021)